SomaliTalk.com » Maxaa shacabka Soomaaliya ka filaya xukuumada cusub marba haddii la magacaabay Ra’iisal Wasaare
Haddaba, waxaa in la is weydiyo istaahila sidee ISBEDEL-DOONOW baa wax loobadalaya? Maxaa la bedelaya? Yaa wax bedelaya? Hangool noocmaa isbedelka loo adeegsan kara ? Sababta iyo baahida keentay in wax labedelayose maxay tahay? Yaa loo maleyn karaa oo diidi doono inuu idhacosbedelka?
Guddoonka barlamaanka haduu mashruucaas dadweynaha ay soo jeediyeen u arko arrin dood la gelin waa in loo gudbiyo golaha si barlamaanka go’aan uga gaaro ayadoo dadka soo qadimay mashruucaas aaney dood ka qayb galin.
Dhiigu cusubi intaan Soomaalida bugta lagu shubin waa in marka hore la soo mariyo sheybaar casri ah kaasoo lagu soo tijaabiyo inuusan dhiigu sumeysneyn si uusan noqon mid dilaa ah oo cudur keena balse uu keeno hotdrrfs horumar lagu diirsado oo dhan walba ah.
Qoraalladii hore: http://somalitalk.com/tag/walaayo/